Fanitsiana: Manitsy ny fahadisoana amin'ny famandrihana Pronoun
Fiteny Fanazaran-tena & Quizzes
Fanitsiana fanatanjahantena: Manitsy ny fahadisoana amin'ny fanondroana ny teny
Ity fanazaran-tena ity dia hanome anao ny fampiasana ny fanitsiana ny fahadisoana amin'ny teny pronoun .
Ny sasantsasany amin'ireto sazy manaraka ireto dia misy hadisoana ao amin'ny pronoun pronoun . Soraty ireo fehezanteny 15 ireo, mba ho azo antoka fa ny mpisolo anarana rehetra dia manondro mazava tsara ny fanendrena azy . Amin'ny toe-javatra sasany dia mety ilainao ny manolo ny mpisolo anarana amin'ny anarana na mametraka faneriterena iray izay lazain'ny mpisolo anarana ara-lojika.
Rehefa vita ny fampiharana, ampitahao ny soso-kevitra naverina nodinihina miaraka amin'ireo eo amin'ny faran'ny pejy.
Tamin'ny herintaona i Vince no nandray anjara tamin'ny ekipa lacrosseur tao amin'ny oniversite, saingy tamin'ity taona ity dia sahirana loatra izy hanao izany.
Ao amin'ny sakafo dia milaza izy ireo fa ny saosy pasta dia homemade.
Rehefa noraisin'ilay zazalahy tamim-pitandremana ny puppy, dia nitsangana ny sofiny ary nanomboka naneno ny rambony.
Ny reniko dia mpivarotra mailaka, fa tsy manakarena ahy izy ireo.
Taorian'ny nanatrehan'ny governora Baldridge ilay liona, dia nentina tany amin'ny Main Street izy ary nanome sakafo 25 kilaometatra teo anoloan'ny Fox Theatre.
Rehefa avy nanamboatra alika miaraka amin'ny servieta iray ny alikanao, azafady mba averina any amin'ny milina fanasana.
Nangataka ny fanolorana mpianatra aho, saingy nitodika aho.
Satria ny fahatsapana sy ny alahelo dia mety hanimba anao ara-pihetseham-po aminao sy amin'ireo zanakao, dia tokony hanaisotra azy ireo ianao.
Aorian'ny fanesorana ny roatra avy amin'ny fanosotra dia avelao hisotro rano anaty rano izy.
Ny sotro amin'ny tanana iray sy ny baolina baolina amin'ny andaniny, i Merdine dia nanandratra izany teo amin'ny molony ary nitelina azy tamin'ny fefy mahery iray.
Ao amin'ny katalaogin'ny kolotsaina dia milaza fa hosamborina ireo mpianatra.
Fotoana vitsy taorian'ny nitorahan'ny lehibeny ny sokatra nentim-paharatran'ny siramamy teo amin'ny tsipìkan'ilay sambo nobel, dia nidina moramora sy tamim-pitandremana teo amin'ny lalana izy ary niditra tao anaty rano niaraka taminà sangisangy.
Rehefa napetrak'i Frank ilay vazy teo amin'ny latabatra mitsangana, dia tapaka izany.
Nisy biravava tapaka niditra tao amin'ny trano fisotroan-dronono ary tsy nahatsiaro ny lohany; Tsy maintsy nesorina teo anoloan'io lehilahy io ny famonjena.
Rehefa misy mpianatra apetraka amin'ny fizahan-toetra, dia azonao atao ny mametraka fitarainana amin'ny dean.
Ireto misy valiny momba ny fanitsiana fanitsiana: Manitsy ny fahadisoana amin'ny fanondroana ny teny. Mariho fa amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia azo atao ny mamaly valiny marina.
Tamin'ny herintaona i Vince no nandray anjara tamin'ny ekipan'ny lacrosseur, saingy tamin'ity taona ity dia sahirana loatra izy hilalao.
Araka ny voalazan'ny menio, ny saosy pasta dia homemade.
Rehefa noraisin'ilay zazalahy moramora ilay puppy, dia nitsangana ny sofiny ary nanomboka naneno ny rambony.
Ny reniko dia mpivarotra mailaka, fa ny biraon'ny paositra dia tsy hanakalo ahy.
Taorian'ilay liona natao ho an'ny governora Baldridge, dia nentina tany amin'ny Main Street izy ary nomena sakafo 25 teo ho eo teo anoloan'ny Fox Theatre.
Aorian'ny fandosiranao ny alikanao amin'ny servieta, tadidio ny manosotra ny lamba ho any amin'ny milina fanasana.
Nofoanana ny fangatahana nataoko ho an'ny mpianatra.
Tokony hanaisotra ny fahatsapana ho meloka sy ny lolom-po ianao satria mety hanimba anao ara-pihetseham-po aminao sy ny zanakao.
Aorian'ny fanesorana ny roatra, avelao hitrotro ao anaty ranom-boasary ny ranomandry.
Niaraka tamin'ilay baolina baolina amin'ny tanana iray i Merdine dia nanandratra ny labiera teo amin'ny molony ary nitelina azy tamin'ny fefy mahery iray.
Araka ny voalazan'ny kolejy any amin'ny oniversite, hosamborina ireo mpianatra.
Fotoana vitsy taorian'ny nahavitan'ny lehibeny ny sokatra nentim-paharatran'ny siramamy teo amin'ny tsipìkany, dia nidina tsikelikely ny sambony ary nidona tamim-pahavitrihana ilay sambo nobaboina ka niditra tao anaty rano.
Nipoaka ilay vazy rehefa nametraka azy teo amin'ny latabatra farany ambany i Frank.
Ny birao nipetrahan'ny kabinetra, tsy nahitana ny lohan'ilay mpamily fotsiny, dia nesorina talohan'ny nahafahan'ny olona voavonjy.
Rehefa napetraka ny fotoam-pitsapana, dia afaka mandefa antso miaraka amin'ny dean ny mpianatra.
Manaova fampihetseham-po amin'ny famantarana ireo fehezin'ny asa
Famakiana ny Quiz momba ny 'antony tiako ho vady' avy amin'i Judy Brady
Manaova fampihetseham-po amin'ny famaritana ny sori-dalana, ny adikao, ary ny teny root
Manaova fampihetseham-po amin'ny famantarana ireo singa mifangaro
Tsikera momba ny lahatenin'ny Dr. King's "Izaho dia manana nofy"
Mahaiza mandanjalanja momba ny fanambarana fanadihadiana mahomby
Tsikera momba ny teny diso mahazatra 25
Famakiana ny Quiz momba ny 'eritreretiny hoe miloko ahy' avy amin'i Zora Neale Hurston
Famerenana fanatanjahantena: Ny fampiasana koma sy semicolons dia tsara
Mahaiza mandanjalanja amin'ny fametrahana ny fandrindrana sy ny fampifanarahana
Manaova fanitsiana amin'ny famerenana fitenenana tsy misy fotony
Manao ahoana ny halafosin'ny volavolan-dalàna momba ny fitaterana an-dalamby?
12 Best Songs R & B
Fampahafantarana ny 'Se' amin'ny teny Espaniola
Fahafatesan'ny Ady Lehibe I
Ny antony niadiana ny Ady Lehibe I sy ny fiakaran'i Alemana
Nahoana no sarotra ny fifandraisana lavitra amin'ny fifindra-monina?
3 olana mahazatra fiara mpamokatra solika
Nahoana no nisy mpiaro ny fisamborana ny polisy sasany?
Parts of a guitar acoustic
Ny fanambarana VB.NET Imports
Môrmôna Mino fa Nateraka i Jesosy tamin'ny 6 Aprily
Ahoana no hilalao ny Chord Dsus2
Fiangonana an'ny Rahalahy
Manoratra tantara momba ny fitsarana
Bucephalus dia ny soavin'i Aleksandra Lehibe